Top 5 iPhone ndabere Software nke 2015
Top 5 iPhone ndabere softwares nke 2015
Aka ọ bụrụ na ị na-eche dị ị nwere ike ghara ịnọgide na-usoro nke smartphones ebupụta kwa afọ! Na smartphones i ekesịpde, ị bụ a kwesịrị ntụkwasị obi na nkà na ụzụ ngwaọrụ na-eso ụzọ na fọrọ nke nta a mkpoko nke ụdị. Ọ bụ mgbe na-akpali akpali na-agbalị si nkà na ụzụ ọhụrụ na ngwaọrụ, kama ihe ị dịghị ihe ọzọ na-atụ anya bụ akwado gị ochie smartphone mere na ị pụrụ naghachi oké mkpa data n'ime gị ọhụrụ.
Iji nyere gị aka imeri nsogbu a, ebe a bụ ndepụta nke Top 5 iPhone ndabere Software nke 2015.
Dị ka aha ya na-egosi, a magburu onwe iPhone ndabere software bụ kama ike. Ke otu interface, ị ga-enwe ike ndabere gị iPhone ma nyefee niile data na ọhụrụ gị ama na otu ma ọ bụ abụọ clicks. Ị pụrụ ọbụna ịpasa nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na kọmputa gị mbụ ma ọ bụrụ na ị na-adịghị a ngwaọrụ ọhụrụ na-echekwa ya na!
MobileTrans Bụ data nkwado ndabere na mpaghara transfer software mepụtara Wondershare. Ọ na-ekwe ka ị na-nkwado ndabere na mpaghara transfer data si dị iche iche ngwaọrụ nanị otu click. The software nwere ike mfe nkwado ndabere na mpaghara transfer data ụdị dị ka kọntaktị, ozi ederede, audio, video, kalenda, ngwa, foto na oku na ndekọ. Ọ bụ zuru ezu n'ihe ize ndụ-free na-elekọta nzuzo gị. Ọ na-akwado dị iche iche sistem. Lee ndị isi atụmatụ nke MobileTrans:
Software akwado Android, iOS, na Nokia Symbian. Ọ maara na-arụ ọrụ n'ihi na ihe karịrị 3000 smartphones n'elu dị iche iche na netwọk.
Iji a software i nwere ike ndabere ọdịnaya gị ma weghachi ya na mbụ mma.
Bụrụ na ị chọrọ ihichapu ekwentị data maka arụmọrụ ma ọ bụ resell ihe mere, dị na-eji nke a software na ekwentị ga-tọgharịa ụlọ ọrụ ntọala.
Iji software dị mfe na-ewe nanị ole na ole sekọnd ruru ya kensinammuo interface.
Uru: Dị ka aha ya na-egosi, a magburu onwe iPhone ndabere software bụ kama ike. Ke otu interface, ị ga-enwe ike ndabere gị iPhone ma nyefee niile data na ọhụrụ gị ama na otu ma ọ bụ abụọ clicks. Ị pụrụ ọbụna ịpasa nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na kọmputa gị mbụ ma ọ bụrụ na ị na-adịghị a ngwaọrụ ọhụrụ na-echekwa ya na!
Cons: ụfọdụ faịlụ na ụdị ike a kpọfere gafee dị iche iche sistem eg oku na ndekọ na kalịnda.
The "Smart ndabere" atụmatụ na a software dị ukwuu - ya nanị na-achọ onye pịa nkwado ndabere na mpaghara data (eg metadata, videos, music, photos wdg) na gị iPhone. Ndabere faịlụ na-echekwara na jisiri iji iTunes. Ọzọ ihe na bụ jụụ banyere nke a mma bụ na ị gaghị ejedebe na oyiri faịlụ. Ọzọkwa, ị nwere ike ịpụ na-eji "Manual ndabere" atụmatụ na-enye gị ohere ịhọrọ nke data na ị chọrọ ndabere.
Uru: ike ndabere kasị iPhone faịlụ (ie music, videos ma na fim, ngwa, PDFs, akwụkwọ, pọdkastị, listi ọkpụkpọ, Fim wdg), awade Atụmatụ na usoro nke na-eji software, ala na ike, free si ad, nledo ma ọ bụ malware, dakọtara na niile Apple ngwaọrụ, nakwa dị ka e mere na-arụ ọrụ Windows 10, 8, 7, Vista na XP.
Cons: naanị dakọtara na iOS ngwaọrụ, adịghị akwado image faịlụ na-ewe a ogologo oge akwado faịlụ mgbe tụnyere ndị ọzọ software.
iPhone ndabere Software, Cucusoft
Na nke a software, ị ga-enwe ike ndabere ọdịnaya nke ị iPhone ka a Mac ma ọ bụ PC enweghị adịkwa ọ bụla data. Ya ọ dịghị-nsogbu oge interface ka ọ dị mfe ndabere kọntaktị, SMSes, music, videos, ndetu, photos wdg Onye ọ bụla ndabere faịlụ na-echekwara dị ka ihe iTunes faịlụ.
Uru: dakọtara na okenye iPhones (gụnyere iPhone 5, iPhone 4S, 4, 3GS, 3G na 2G), ike ndabere faịlụ niile na data na gị iPhone, n'ezie mfe iji na mfe interface.
Cons: e nweghị free version maka Mac ọrụ, ewekarị bụghị ghọtara ejikọrọ iPhones na mbụ na-agbalị na adịghị ikwado mweghachi.
Ngwá ọrụ ọzọ na awade ndabere mma ka iPhone ọrụ bụ SynciOS. Nke a software accommodates si iPhone 3GS, iPhone 4, ruo ọhụrụ iPhone nlereanya. Ọ na-wuru na onye ọrụ mma n'uche; nkwado ndabere na mpaghara usoro pụrụ rụrụ na-enweghị mkpa ahu nagide iTunes ma ọ bụ iCloud. Ime dee, Otú ọ dị, iTunes mkpa ka a arụnyere na kọmputa gị, ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-adịghị eji ya n'oge gị mmịpụta usoro.
Uru: ike ndabere fọrọ nke nta ọ bụla otu data (gụnyere gara aga ntọala) na faịlụ site na gị iPhone, nwere ike naghachi faịlụ na nkwado ndabere data maka gị iPhone, dakọtara na fọrọ nke nta niile usoro, nakwa dị ka jikwaa ngwa ọdịnala na nyefee eBooks n'etiti dị iche iche nyiwe.
Cons: Ọ na-akwado iOS ngwaọrụ na ọzọ drawback na nke a software bụ na ọ ga-ewe ogologo oge nyefee bụrụ na ị nwere ogologo ndepụta nke faịlụ na-bufee.
A software na bụ ike na ha bụ ezigbo ndabere maka gị iPhone, AnyTrans 'forte bụ na ya na preview ikike; ikwe ọrụ na-agagharị na site na faịlụ n'ihu akwado faịlụ ndị ahọrọ nke ha mmasị. Nke a dị mfe iji software ike wepụ data si ma na iCloud, iTunes ma ọ bụ kọmputa ndabere. Ke adianade do, ọrụ nwekwara ike ịrụ data enyefe n'etiti kọmputa, iOS ngwaọrụ na iTunes onwe ya.
Uru: nwere ike ndabere na mbupụ dị iche iche faịlụ (eg akụkụ, ndetu, ngwa data, na-akpọ ihe mere eme, na kọntaktị na ọtụtụ ndị ọzọ) na ya interface dị mfe ịnyagharịa.
Cons: ibu ọnụ, ga-ọgbaghara gị playlist (ndabara, ọ ga-ndokwa songs dị ka ụbọchị ị na-azọpụta ọdịyo faịlụ na gị iPhone), media-ọgaranya ọdịnaya ntụgharị videos na ihe oyiyi apụghị previewed tupu mmịpụta usoro, njikọ n'etiti na kọmputa na iPhone wee etre na ị ga-mkpa-amalite dum usoro ugboro ugboro, na-emepụta nchekwa nke ndabere faịlụ a na-ahazighị ahazi n'ụzọ, na-ewe ogologo oge na-ịmepụta ndabere faịlụ.
> Resource> iPhone> Top 5 iPhone ndabere softwares nke 2015